Andrasana ny fanamarinana na fandisoana izany, fa raha ny loharanom-baovao iray, dia nisy olona ambony ao anaty fanjakana nanao fanelanelanana sy niaro mafy azy io, ka izay no tsy maha any am-ponja azy. Toe-javatra mety hitranga ihany koa ny fiverenana tsindraindray manao « pointage » any am-ponja. Fahita matetika eto amintsika ny tahaka izany noho ny mety ho fisiana fidirana an-tsehatra (intervention) ataona olona ambony manam-pahefana. Ny 15 jona 2019 teo isika teto amin’ny gazety Tia Tanindrazana, dia namoaka lahatsoratra manoloana ny fisiana loharanom-baovao milaza fa efa any andafy ireo zanaka jeneraly tompon’antoka tamina herisetra, fanambanana basy, teny mamoafady,… natao tamina mpisolovava teny Antanimena ny 01 desambra 2018. Tsy nisy manampahefana nijoro sy nandiso izany, izay mety ho azo adika fa efa navotsotra tokoa izy ireo. Mety nisy fifanarahana tany ho any. Ny lesona azo tsoahina dia ny hoe: toa tsy natao ho an’ny manan-katao sy olona akaiky olona ambony ny lalàna. Andrasana izany ny fanazavana ataon’ny manampahefana amin’ny fanamarinana na fandisoana ny loharanom-baovao milaza fa tsy migadra araka ny tokony ho izy akory ilay Tale ara-bola teo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina noho ny fidirana an-tsehatra nataona olona ambony iray eto amin’ny firenena.Im-betsaka no niteny sy nanizingizina ny filoha Andry Rajoelina fa hiady amin’ny kolikoly ary hosaziana araka ny lalàna velona izay rehetra voamarina fa meloka na iza na iza..koa dia andrasana ny ho tohin’ity raharaha iray ity izany.